सिंगापुरमा आफ्नै शौचालय बोकेर गएका थिए “किम”, किन त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन दिसा ? – USNEPALNEWS.COM
सिंगापुरमा आफ्नै शौचालय बोकेर गएका थिए “किम”, किन त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन दिसा ?
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग वार्ता गर्न सिंगापुर पुगेका उत्तर कोरियाली नेताले आफ्नो व्यक्तिगत शौचालय लिएर गएका छन् ।
किमले सिंगापुरमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न नचाहेकाले आफ्नै शौचालय लिएर गएका हुन् ।
दक्षिण कोरियाको समाचार संस्था थे चोसुनिल्बोले एयर चाइना बोइङ ७४७ विमानबाट सिंगापुर आउँदा उनीसँगै आईएल–७६ मालवाहक विमान पनि आएको र त्यसमा उनको बुलेटप्रूफ गाडी र बोक्न मिल्ने शौचालय रहेको लेख्यो ।
सन् २००५ मा दक्षिण कोरियातर्फ भागेका पूर्व उत्तर कोरियाली गार्ड कमान्ड इकाइका ली युन कीयोलले यो सामान्य कुरा भएको बताए ।
‘सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नुभन्दा उत्तर कोरियाका नेताले यात्रा गर्ने क्रममा निजी शौचालय प्रयोग गर्छन्,’ लीले द वाशिङटन पोस्टलाई बताए ।
किमको दिसाको विश्लेषण कसैले गर्न नपाऊन् भनी यसो गरिएको छ ।
‘किमको दिसामा उनको स्वास्थ्यस्थितिको जानकारी अवश्य हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन,’ लीले व्याख्या गरे ।
किमले देशभित्रै पनि सैनिक अड्डा र सरकारसञ्चालित कारखानाको निरीक्षण भ्रमण गर्दा निजी शौचालय लिएर जाने गरेका छन् । किमको गाडीमा पनि एउटा शौचालय फिट गरिएको हुने दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था डेलीएनकेले
आईजिपि बनाउन नसकेपछि चन्दलाई देउवाको अर्को अफर
by यूस नेपाल न्युज	 February 19, 2017
छिटोे स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ –अध्यक्ष जबरा